Unako Ukonwaba Ebomini
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLatvia IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
INQAKU ELINGUMXHOLO: UNAKO UKONWABA EBOMINI
“Iminyaka yomntu iba ngamashum’ asixhenxe—xa ngaba womelele ibe ngamashum’ asibhozo; kodwa iza neenkxwaleko neentsizi.”—INdumiso 90:10, IBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996.
LA mazwi angasentla achan’ ucwethe! Ubomi esibuphila kweli hlabathi buzaliswe ‘ziinkxwaleko neentsizi.’ Mhlawumbi wakha wazibuza ukuba, ‘Ngaba umntu unako ukonwaba ebomini namhlanje?’
Ngokomzekelo, makhe sithethe ngoMaria. Xa wayesemtsha wayengumntu okhutheleyo, kodwa ngoku ekubeni eneminyaka engama-84 kufuneka kusoloko kukho umntu omkhaphayo naphi na apho esiya khona. Engqondweni usengumqabaqaba, kodwa ke umzimba wona awuvumi. Ngaba unako ukonwaba ebomini?
Kuthekani ngawe? Mhlawumbi nawe wakha wazibuza ukuba uphilela ntoni? Kusenokwenza ukuba emsebenzini wenza into enye yonke imihla kwaye usoloko udiniwe. Nabanye basenokuba abakuxabisi oko ukwenzayo. Enoba izinto zikuhambela kakuhle okwangoku, kusenokwenzeka ukuba uyaxhalaba xa ucinga ngekamva. Ngamanye amaxesha usenokude uzive ulilolo okanye uxinezelekile. Nasentsatsheni kusenokubakho iingxabano nokungevani. Mhlawumbi ufelwe lilungu lentsapho okanye umhlobo. UAndré wayemthanda gqitha uyise, kodwa ke ngelishwa wasuka wagula waza wafa. Kwamkhathaza gqitha oku uAndré yaye kwakungathi linxeba elingenakuze liphole.
Enoba zingakanani iingxaki esijamelene nazo, kukho umbuzo esifanele sifumane impendulo yawo: Ngaba sinako ukonwaba ebomini? Impendulo yalo mbuzo sinokuyifumana ngokufunda ngobomi bukaYesu Kristu—indoda eyayiphila kwiminyaka emalunga nama-2,000 eyadlulayo. UYesu wayonwabile nangona wayeneengxaki ezininzi. Nathi sinako ukonwaba ukuba siyamxelisa.